Elive 3.0, iyo vhezheni yatange tese takamirira | Linux Vakapindwa muropa
Musi waSeptember 10, vhezheni nyowani yekuparadzirwa kwakakurumbira yakaburitswa pakati pevanoda kureruka Gnu / Linux migove Ndiri kutaura nezve Elive, kugovera kwakaburitsa yayo vhezheni 3, ndokuti, Elive 3.0.
Iyi vhezheni yatora anopfuura makore masere kukura, chimwe chinhu chinobva pane zvakajairwa, sekungofanana nechikwata chayo chisina kujairika, chakangoumbwa chete neyemugadziri wayo uye nemukurumbira wayo wakashata wekugovera kwevaridzi.Kusvika parizvino, iye Elive wekuvandudza aikumbira mari kuti atore Elive, chimwe chinhu chinganzvengwa kana tichida. Zvino izvi zvachinja uye Iwe hauchade kuita mupiro kurodha pasi Elive ISO mufananidzo, kunyange hazvo mipiro ichiramba ichigamuchirwa.
Elive 3.0 ichiri kuvaka paDebian neChiedza uye matani ekugadzirisa uye magadzirirwo ayo anoita kuti musanganiswa usanyanya kuve nyore kubereka uye kukwana kune chero timu ine mashoma zviwanikwa. Kugadzira Elive 3.0 kushanda tinoda laptop kana komputa ine zvinotevera zvinodiwa:
256 MB gondohwe
Iyo processor ine 500 mHz.
Angangoita 10 Gb yeHDD.
Graphics kadhi inoenderana ne800x 600 pixels.
Izvi zvinodikanwa zvinosangana neanenge ese mashini aripo pamusika uye iwo anopfuura makore gumi nemashanu ekuberekwa., iyo inoita Elive 3.0 kugovera uko kunotipa isu yazvino Gnu / Linux yemakomputa ekare-kare kana akapera.
Elive 3.0 maficha haana kuderedzwa kana ichienzaniswa neshanduro dzakapfuura uye mashandiro, kumhanya uye chimiro zvinoramba zvichichengetwa mushanduro iyi nyowani. Uyewo, iyo yepamutemo webhusaiti Yakagadziridzwa uye yakagadziridzwa, saka tichaona zviri nyore kurodha Elive 3.0, kunyangwe zvisiri nyore kuwana shanduro dzekare nedzisina dzeElive.
Ini pachangu ndinoda iyi distro nekuti yakavakirwa paDebian uye nekuti inogadzira midziyo yedu isina simba inokurumidza uye inoshanda sekunge raive zuva ravo rekutanga. Kwenguva yakareba yaive mambokadzi wekuparadzira kurema uye ndinofunga zvichazove zvakare Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Elive 3.0, iyo vhezheni yatange takamirira tese
Chaizvoizvo inoyevedza graphic mhando, uye kuti inogona kushanda pamakomputa ane makore gumi kana gumi nemashanu, iri basa rakanakisa.
Pindura kuna joscar7
Kubudirira kwese kunogamuchirwa, asi ini ndinoona chimwe chinhu chisina musoro kutora makore masere kushambadza chimwe chinhu chiri chevashandisi "vasingafarire" vasingashandise mari yezvigadzirwa zvemazuva ano, nhasi unogona kutenga makomputa eeur e8 kana € 80 kana usiri kuda kusimudzira iri nekuti haina kukupa iwe kuhwina, ini handinzwisise iyo poindi yekugadzira chimwe chinhu chakadai uye nekuchaja icho, chokwadi.
256mb ye RAM uye 500Mhz, yakashandiswa naJesu Kristu 2000 makore apfuura.